Mirrors Nepal » अचम्म ! कहाँबाट आए मान्छेका ५४ वटा हात ?
अचम्म ! कहाँबाट आए मान्छेका ५४ वटा हात ?
२८ फाल्गुन २०७४, सोमबार १२:४७
चिसोका कारण जमेर बरफ बनेको नदीमा मानिसको हातका दर्जनौँ टुक्रा फेला परेपछि त्यसले ठूलो रह😲 सिर्जना गरेको छ । सुदुरपूर्वी साइबेरियास्थित खाब्राओभ्स्क सहर नजिकै अमुर नदीमा ५४ वटा मानव हात फेला परेका हुन् । स्थानीय बासिन्दाले पहिलोपटक जमेको पानीमा मान्छेका हात देखेका थिए ।
ती मध्ये ५३ वटा झोलाभित्र थिए भने एउटा बाहिरै थियो ।
ती लास को मानिसका हुन् भन्ने पत्ता लागेको छैन । मान्छेका लासको तस्करी गर्ने तस्करहरुले औँठाछापबाट मान्छेको पहिचान नहोस् भन्नका लागि लासको हात काटेर फ्याँकिदिएको र बाँकी सरीर लिएर गएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपयले चाहीँ ती हातहरु चोरी गर्ने मानिसलाई सजायँ दिएर काटिदिएका हात भएको दाबी गरेका छन् ।
कतिले अस्पतालमा दुर्घटना वा रोगका कारण हात काट्नुपर्ने अवस्थाका मानिसका काटिएका हात भएको हुनसक्ने पनि अनुमान गरेका छन् । मान्छेका हात रहेको ठाउँके नजिकै अस्पतालमा प्रयोग हुने पञ्जा समेत फेला परेको थियो । पुलिसले यसबारेमा केहीपनि बताएको छैन । –